DF Somalia oo digniin cusub kasoo saartay dhanka badaha dalka & cidda ay digniintani ku fooggan tahay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo digniin cusub kasoo saartay dhanka badaha dalka & cidda...
DF Somalia oo digniin cusub kasoo saartay dhanka badaha dalka & cidda ay digniintani ku fooggan tahay!
(Hadalsame) 20 Okt 2021 – Dowladda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ah uga kalluumeysanayo xeebaha. Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in caddaallada la horgeeni dadka lagu helo arrintaas.
“Waxaan rajeynayaa in xilli aan fogeyn la soo qab qabto maraakiibtaas. Xafiiska xeer ilaalinta ee awoodda u leh in maxkamad uu horgeeyo cid kasta uu ku lug leh qeybna ka ah kalluumeysigaas sharci darrada ah”.
XIGASHADA SAWIRKA,AFP Dhaqdhaqaaqyadii burcad badeedda Soomaaliya oo istaagay
Waxaana howlaha kalluumeysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya ay qeyb yihiin dad Soomaali ah, kuwaas oo howsha u fududeynaya kalluumeysatada ajaaniibta ah, sida laga soo xigtay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya.
Toddobaadkii la soo dhaafay ayay aheyd markii Maxkamadda Caddaalladda Adduunka ay go’aan ka soo saartay dacwaddii badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Maxkamadda waxay inta badan aaggii lagu muransanaa u xukmisay Soomaaliya, halka Kenya ay heshay qeybo yar oo dhulkaas ah.
Waxaa sanadihii u dambeeyay istaagay dhaqdhaqaaqyadii ay burcad badeeda ku afduuban jireen maraakiibta xeebaha Soomaaliya.
Wuxuu sidoo kale jira maraakiib caalami ah oo ay la socdaan ciidamo ajaaniib ah oo ka howlgala badda Soomaaliya iyo badweynta Hindiya ee ku dhow, waxayna ka hor tagaan afduubka maraakiibta.
Sannadkii 2018 ayay aheyd markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ay dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ku saxiixday heshiis si daah furan loogu bixinayo shatiyo kalluumeysi ah oo la siiyay iskaashatooyin ka soo jeeda dalka Shiinaha.
Shatiyadan oo gaaraya 31 ayaa lagu bixiyay lacag dhan hal milyan oo doolar-ka Mareykanka ah, waxaana heshiiskan saxiixay wasaaradda kalluumeysiga ee soomaaliya.
Previous articleMAQAAL: Gulufka Guriceel, goosha ASWJ & guddoonka Qoorqoor
Next articleFacebook oo magaca laga bedelayo (Goorta lagu dhawaaqi karo & magaca la hadal hayo?)